TETIKASA PRINCE2: Torolalana iray manontolo - ITS Tech School
PRINCE2 Fanamarinana: Torolalana iray feno
PRINCE2 dia fanafohezana ny "Projects In Controlled Environments". Izany dia fomba fitantanana tetik'asa fanarahamaso izay mamela anao hanatratra ny zava-dehibe rehetra amin'ny fitantanana tetikasa iray mahomby. Tany am-boalohany dia natokana ho an'ny tontolo iainana ihany izy io, saingy mandrakotra ny karazana tetikasa rehetra sy ireo sehatra hafa rehetra amin'ny indostria. Tamin'ny voalohany, rehefa navoaka tao amin'ny 1996, dia fomba fitantanana manerantany ny tetikasa saingy ankehitriny dia fenitra de-facto amin'ny fitantanana ny tetikasa any amin'ny departemantan'ny governemanta sy ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny PRINCE2 dia manantitrantitra fa ny fizarana ny tetikasa ho laharam-pahamehana mora sy mora azo. Ny fanamarinana PRINCE2 dia afaka manampy anao amin'ny fitomboan'ny asa
Ao amin'ny 2013, ny zon'ny tompon'ny PRINCE2 dia nafindra tao amin'ny HM Cabinet Office AXELOS Ltd (ny tompony nozaraina teo amin'ny Kabinetran'ny Kabinetra sy ny Capita plc.).
PRINCE2 Fanamarinana - Torolalana iray feno
FAMPIANARANA SY FIANARANA I PRINCE2
FAMPIANARANA II - PRINCE2 Fampiofanana momba ny traikefa
Raha olona liana amin'ny andraikitry ny tetikasa ianao, dia azo antoka fa hanampy anao amin'ny fampandrosoana ny asa i PRINCE2. Ity fanamarinana ity dia misy dingana roa: PRINCE2 Foundation sy PRINCE2 mpandalina. Ny fampianarana PRINCE2 dia afaka manomana anao ho an'ny roa ary mampahafantatra anao ihany koa ny fitsipika de-facto izay manaraka izao tontolo izao. Mandritra ny fampiofanana, dia mahazo fahalalana momba ny fitantanana ny tetik'asa momba ny fitantanana ny tetikasa sy ny fanao tsara indrindra araka ny fenitra PRINCE2.
Averina amin'ny PRINCE2
PRINCE2 dia fitsipika mifehy ny fitantanana ny tetikasa. Izy io dia ahitana fitsipika fito, lohahevitra fito ary fizarana fito.
lohahevitra: Ny lohahevitra dia lafiny iray manan-danja amin'ny tetikasa rehetra, izay tsy maintsy mikiry sy mifandray amin'ny fifandraisana raha toa ka tokony hahomby ny famonoana tetikasa iray. Ireo lohahevitra fito dia:
TORO LALANA: Ny fitantanana ny tetikasa dia misy fitsipika fito izay fanao iraisan'ny rehetra izay azo ampiharina amin'ny tetikasa rehetra. Ireo fitsipika fito dia:
Fanavaozana ny Business
Mianara amin'ny traikefa
Mitantana amin'ny Exception
Manamboatra ny tontolo iainana tetikasa
dingana: Ny dingana fito dia ny dingana lehibe ilaina amin'ny fitantanana, ny fitantanana ary ny famoahana tetikasa iray mahomby. Ireo fizarana fito dia ahitana:
Fananganana tetikasa iray
Manara-maso ny dingana
Mitantana ny vokatra entana
Mitantana ny sisin-tany
Ireo fitsipika sy foto-kevitra voalaza etsy ambony ireo dia mihatra amin'ireo fizarana fito ireo.
Antony lehibe indrindra tokony ho azonao ny fanamarinana PRINCE2?
Mba hahazoana fifanekem-pihavanana eo amin'ireo mpiara-mianatra aminao- Ny fanamarinana PRINCE2 certification dia fanamarinana ny fahaiza-manaonao amin'ny maha-fitantanana ny tetik'asa momba ny tetikasa sy ny fahaizanao mampihatra ny fomba METY PRINCE2.
Fanekena ny fahalalanao, ny fahaiza-manaonao ary ny fahaiza-manao- Izany dia famporisihana tsy manam-paharoa amin'ny fahaizana mitantana ny tetikasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny fahombiazana - ny fanamarinana PRINCE2 dia maneho ny fahaiza-manaony amin'ny maha-mpitarika ny tetik'asa manerantany.
Ny fahafahana miasa bebe kokoa sy ny fidiram-bola bebe kokoa - Amin'ny alalan'ity fanamarinana ity, dia ho afaka hijery asa tsara kokoa ianao. Ireo mpihazona mari-pankasitrahana dia afaka manantena ihany koa ny fitomboan'ny karama ambony.
Fampandrosoana amin'ny asa-Ny fananana mari-pankasitrahana PRINCE2 dia maneho ny fahavononanao handray andraikitra lehibe kokoa.
Fanatsarana ny fahalalàna sy ny fahaiza-Manomana ny PRINCE2certification dia mitaky ny handinihanao sy hijerena ireo fizotran'ny fitantanana sy ny teknolojia ampiasaina. Ity dia nasongadin'ny fanamarinana azonao.
Mitombo ny fahatokisany- Amin'ny fahalalana, ny fahaiza-manao, ny fahaiza-manao sy ny sehatry ny indostria, ianao dia manangana fahatsapana fahatokisan-tena ary vonona ny hamaritra ny tenanao ankoatra ny lohan'ny asa.
Jereo ihany koa: PMP Certification Career Opportunities
I STEP I - Fampiofanana fototra PRINCE2
Ny fampiofanana ny PRINCE2 Foundation dia manasongadina ny teoria. Ny fahalalana ny teoria dia miantoka fa ny mpilatsaka hofidiana dia mahatoky raha manao fampiharana ny PRINCE2 fianarana amin'ny sehatra matihanina. Ny fitsipika, ny lohahevitra ary ny doka dia tokony ho takatra amin'ny antsipiriany.
Ny Exam Study Foundation dia manombatombana kandidà iray amin'ny fahafahany mandray andraikitra eo anivon'ny ekipa mpitantana ny tetikasa mampiasa PRINCE2. Ny fanesorana ny fanadinana dia manamarina ny fahatakaran'ny kandidà momba ny terminology PRINCE2, ny foto-keviny, ny lohahevitra ary ny fizotrany.
Rehefa vita ny fampiofanana momba ny Fanorenana, ny profesora dia afaka manao izao manaraka izao:
Mamolavola ny tanjona sy ny votoatin'ny andraikitra rehetra ao anatin'ireo lohahevitra fito, fitsipika sy fizarana tsirairay.
Ny famaritana hoe iza amin'ireo tetik'asa fitantanana dia miditra amin'ny / sy ny vokatra azo avy amin'ireo dingana fito.
Famaritana ny votoatin-dresaka sy ny tanjona voalohan'ny vokatra fitantanana.
Fametrahana ny fifandraisana misy eo amin'ny andraikitry ny roles, ny paikady, ny fanamafisana ny fitantanana sy ny famoahana ny tetikasa.
Fanadinana fianarana fototra:
Format - fanontaniana maro samihafa
Fitsipika - tsy misy
Total no. ny fanontaniana - 75
Famotopotorana - 5
Fiafaran-dàlana - 35 (na 50%)
Fandaharam-pitsarana: ora ora 1
Fanaovana fanadinana - Closed boky
STEP II - PRINCE2 Fampiofanana momba ny traikefa
Aorian'ny Fampiofanana ny Foundation, ny fanamarinana PRINCE2 Practitioner dia manamafy fa ny kandidà dia nahatakatra ny fampiharana ny PRINCE2 amin'ny tetikasa tena izy. Amin'ny tari-dalana mety, ny kandidà dia afaka hampihatra ireo fomba fianarana amin'ny tetikasa efa misy ho an'ny famonoana azy.
Ny sasany amin'ny PRINCE2 fianarana dia tsy maintsy atao fotsiny eo amin'ny sehatry ny dokotera. Raha toa ka manombana ny fahalalan'ny mpirotsaka momba ny lohahevitra, ny foto-kevitra, ny fizotrany sy ny andraikiny ny fanadin-kevitry ny Fondation, dia manombana ny fahaizan'izy ireo hampihatra ny fomba fiasa PRINCE2 ao anatin'ny sehatra iray.
Rehefa vita ny fanofanana ny fanofanana sy ny fanadinana PRINCE, dia hanana fahafahana ianao:
Mamolavola fanazavana lalina momba ny lohahevitra rehetra, ny fitsipika ary ny dingana rehetra amin'ny ohatra manaporofo ny vokatra PRINCE2 rehetra mba hampiharana ny tetikasa manokana.
Mampiseho ny fahatakarana ny fifandraisana eo amin'ny fitsipika, ny lohahevitra ary ny dingana sy ny PROINCE2 vokatra miaraka amin'ny fahafahana hampihatra izany fahatakarana izany.
Ny fahatakarana ny antony manosika ny fitsipika, ny lohahevitra ary ny fizotrany ary koa ny fahatakarana ireo foto-kevitra ao ambadik'ireo singa ireo.
Fanadinana momba ny traikefa:
Vondrona - PRINCE2 Foundation, PMP®, CAPM®, IPMA-D, IPMA-C, IPMA-B, na IPMA-A
Format - Object type, 8 fanontaniana X XMLX Items
Fanamarinana - 55%
Fanaovana fanadinana - boky misokatra (boky ofisialy PRINCE2)
Hanangona fitaovana fianarana mety. Ny vohikala ofisialin'ny AXELOS dia afaka manampy azy amin'izany.
Andramo ny mamaha ny taratasy iray na roa samihafa mba hamakafakandrianao ny lanjanao sy ny sainao hanondro ny faritra malemy. Hanampy anao koa ny hampiasa azy io amin'ny endrika fanadinana. Azo alaina avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny AXELOS ny taratasy samples.
Ny fomba amam-panao manaraka ny fandaminana misy anao dia mety tsy hanampy. Noho izany dia tsara kokoa ny mifikitra amin'ny metodolojika amin'ny PRINCE2 raha mamaly.
Hanampy anao hamantatra ny fahaizanao izany.
Fampiofanana fototra ITIL amin'ny fomba fijerin'ny farihy, Florida amin'ny 7 th ny 9 ny volana Aogositra
Fanofanana ITIL Foundation Fampiofanana amin'ny Septambra - Sept. XV.